Posted by JuneOne at 12:25 AM
Anonymous June 1, 2012 at 2:16 AM
Happy 4th Birthday ပါ Edwin လေး...
ဖေဖေ မေမေ ညီမလေးတို့နဲ့ အမြဲပျော်ရွှင်ပါစေ...။
31-05-2012(4 နှစ်ပြည့်ဖို့ နာရီပိုင်းအလို ည ၈နာရီလောက်က ရိုက်ထားတာ)ဆိုတဲ့ပုံမှာ သူကြည့်ပုံကိုကြိုက်တယ်.. ကြည့်ပုံက မိုက်တယ်နော်....
JuneOne June 1, 2012 at 8:10 AM
ကျေးဇူး အန်တီစင်စင် (Edwin ကိုယ်စား)
Anonymous June 1, 2012 at 4:43 AM
JuneOne June 1, 2012 at 8:11 AM
ကျေးဇူး အန်တီရီရီ (Edwin ကိုယ်စား)
Rita June 1, 2012 at 8:55 AM
Happy Birthday, chit Edwin!
brighter new years ahead!
JuneOne June 1, 2012 at 10:22 AM
Thanks chit aunty Rita:)
Anonymous June 1, 2012 at 9:24 AM
JuneOne June 1, 2012 at 1:01 PM
Aunty Phyu June 1, 2012 at 11:04 AM
Happy Birthday! Thar Thar
JuneOne June 1, 2012 at 1:00 PM
Thanks Aunty Phyu
Thandar Lwin June 1, 2012 at 12:45 PM
ရက်စက်တယ် အိညှောင့် တဲ့ ..ခေါ်ပါနဲ့ အဲလို ...
ဖေဖေ မေမေ ညီမလေး မေ တို့ နှင့် အတူ အမြဲ ပျော်ရွှင် ကျန်းမာပါစေ ။
သစ်သစ် June 1, 2012 at 1:36 PM
ဘလော့တွေဖေ့ဘွတ်တွေသုံးရင်း သိလာရတဲ့ ကလေးလေးတွေထဲမှာ Edwin လေးက ပထမဆုံးပါပဲ ဂျွန်ဝမ်းဆိုတာလေးက သူ့မွေးနေ့ဆိုတာအမြဲအမှတ်ရနေခဲ့တာ... ခုနောက်ပိုင်းကတော့ မှုံနံသာ ဒီကလေးလေးတွေကြီးပြင်းလာရတာ သစ်သစ်တို့နဲ့မတူသလို လူချစ်လူခင်တအားများပြီး သိပ်ချစ်စရာကောင်းတယ် ။
ဟက်ပီးဘတ်ဒေးပါ Edwin လေးရေ...
JuneOne June 1, 2012 at 2:10 PM
ကျေးဇူး အန်တီ သစ်သစ်။အင်တာနက်ကြီး ကျေးဇူးကြောင့် သားသား လဲ မားမားရဲ့ဘလော့ မော်ဒယ်ဖြစ်ခဲ့ရတာ။
Edwin ကိုယ်စား (သူ့အမေ)
Myo Mon Yee Oo June 1, 2012 at 10:17 PM
Happy Birthday to your lovely son
JuneOne June 3, 2012 at 5:07 PM
Thanks Mon Mon
Anonymous June 3, 2012 at 12:25 AM
ဒီနေ့ဖုန်းကရက်စွဲမှာ ဂျွန်တူးဆိုတာမြင်လိုက်တော့ ဂျွန်ဝမ်းဆိုတာပါသတိရပီး Edwin လေး မွေးနေ့ဆိုတာပါ သတိရသွားတာ။ အမြဲလာဖတ်နေကျ စာဖတ်သူပါ။ သားလေးနဲ့ သမီးလေးအကြောင်းတွေ ဖတ်ရတာ စိတ်ဝင်စားပြီး အမြဲသဘောကျပါတယ်။ ကျနော်လဲ ငယ်ငယ်ကတည်းက စာဖတ်ဝါသနာအလွန်ပါသူမို့ သားလေးစာဖတ်တာကို သဘောကျမိတယ်။
JuneOne June 3, 2012 at 5:09 PM
JuneOne June 3, 2012 at 5:08 PM
Happy Birthday Tha lay Edwin
Happy Birthday Thar lay
ယောက်ျားလေးဆိုတော့ သိပ်အများကြီး မပြောဘူးလို့ ထင်တာဘဲ
phung bella June 28, 2012 at 8:57 PM
T.Z.K July 25, 2012 at 11:21 AM
june one ရေအသစ်တင်ပါအုန်း